Halkaan ka daawo damaashaadka iyo dalxiiska xeebta jaziiro oo lamid ah jaziiradaha caalamka - iftineducation.com
iftineducation.com – Xeebta Jaziira oo ka mid ah Xeebaha ugu ballaaran ee Soomaaliya ayaa noqotay meel loo dalxiis tago, kadib markii dhowaan laga dhinac dhisay Hotel, iyadoo maalinta jimcaha oo kale ay dadka u tagaan inay ka soo cunteeyaan.
Jaziira waxay ka baxsantahay Magaalada Muqdisho ilaa 17-KM
Xeebta Jaziira ayaa ah xeeb aan u saxmad badneyd sida Xeebta Liido oo kale, hadana waxay tahay mid soo camirmaysa, waxaana tani ay suura gelineysa in soo jiidasho u noqoto Hotelka laga dhisay ee loogu magac daray Village, kaasoo ku dhinac yaala agagaarka Xeebta.
Ka sokow in dadka u dabaal tagaan xeebta, waxaa sii wehlisa in Hotelka laga cuno malayga nuucyadiisa kala duwan oo aad loo dubay.
Dadweyne ka baxa Caasimada Muqdisho ayaa bilaabay inay u dalxiis tagaan, kana cunteeyaan, waxaana u badnaa dad qurbaha ka yimid oo Macaansanayay neecaawda ka soo baxeysa xeebta.
Waxay u muuqaal ekaatay sida Xeebaha ama Jasiiradaha caalamka oo kale, iyadoo dad badan oo muddo Soomaaliya ugu dambeysay ay aad u farxad gelisay in Jaziiro ay ku noqoto Jaziiradeedi hore oo xilligii hore loo soo dalxiisi jiray.